Ny fahatsapana ho meloka | Reef Resilience
Ity fizarana ity dia manome fampahalalana momba ny toetran'ny zavamananaina sy ara-batana izay misy fiantraikany amin'ny hoe mihintsana ny haran-dranomasina mandritra ny fisian'ny rano mafana. Ny vatohara tsirairay dia miovaova amin'ny valinteniny amin'ny fahazavana sy ny hafanana. Ny fahasamihafan'ny fahasamihafana amin'ny vatohara sy ny zooxanthellae dia voakasik'ireo toetra toy ny:
Ireo singa hafa mahakasika ny fahantrana amin'ny bakteria (ohatra ny proteinina amin'ny tavy, ny proteinina hafanana, ny fananganana colonie, ny fiovan'ny fitondran-tena mifandraika amin'ny fiakaran'ny hafanana, ny hatevin'ny tavy, ary ny tantaran'ny fanasitranana)
Ireo karazana fahasamihafana
Ny fahasamihafan'ny firenena
Tsy ny karazan-karazan-tsakafo rehetra ihany no mety ho marefo. Ho setrin'ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina, dia mety hihalevona ny vatohara sasany, fa ny karazan-karazana hafa ao amin'io toerana io ihany dia tsy mety. Ny vatohara sasany dia afaka acclimatize Ho any amin'ny fizarana anatiny Ho any amin'ny loha hevitra Amin'ny ankapobeny, ireo karazam-borona izay marefo kokoa amin'ny fahandroana dia mety ho karazana fitomboana be dia be, vatana na lozam-pifandraisana matanjaka ary fihenan-tsakafo. Ireto misy ohatra momba ny endriky ny vatohara fantatra fa marefo kokoa amin'ny adin-tsaina mafana:
Nandritra ny hetsika fanarenana 2010, dia nivadika tany amin'ny toerana sasany ny ambaratonga ara-dalàna ny karazana fahantrana. Ny Corals any Sumatra, Indonezia dia nanaraka ny fomba mahazatra, miaraka amin'ny 90% ny zanatany amin'ny karazam-bolo tena mihamitombo. Saingy naverina tamin'ny toeram-pitsangatsanganana tany Singapour sy Malezia ny lamin'asa, miaraka amin'ny adin-tsaina ara-tsimia eo amin'ny toerana rehetra. Izany dia manolo-kevitra fa ny tantaram-pamokarana tranonkala dia mety hanana anjara asa manan-danja amin'ny famaritana henjana miharo. ref
Ny karazana karazana izay mandefitra kokoa amin'ny fihenjanana ara-tsakafo dia manana endrika fitomboana be dia be, vatana marefo ary fihenan-tsakafo. Sary © S. Kilarski / TNC
Ny karazana karazana izay mora kokoa amin'ny hafanana tsindrin-tsakafo dia maneho amin'ny endrika fampiroboroboana na tabilao, toy ny Seriatopora ary Acropora. Sary havia miankavanana: © J. McManus; NOAA
Any amin'ny faritry ny faritry ny haran-dranomasina, ny karazam-bary mitovitovy amin'ny karazan-tsakafo tsara tarehy, na sampana na tabilao, dia lasa mora kokoa amin'ny fongana. Ireto karazana karajia mora azo ireto dia ahitana:
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy karazana tanteraka amin'ny tsy fahampian-tsakafo marefo, ary ny ankamaroan'ny karazan-tsakafo rehetra dia voan'ny areti-mandoza lehibe nandritra ny hetsika marevaka marefo amin'ny toerana iray na hafa. ref Ny ambaratongam-pahefana ankapobeny ny fanoherana ny fahandroana dia manome porofo mampiahiahy ny ahiahiana hitandro ny fihenjanana. Ity latabatra ity ref manampy ireo mpitantana hahatakatra izay tokony hijerena rehefa manara-maso ny vatohara - izany hoe, ny mpitantana dia afaka manombana ny karazana karaoty ao amin'ny faritra misy azy ireo mba hamaritana izay mety ho ny manga indrindra indrindra.
Fine branch; matevina Pocilloporidae Seriatopora
Fandraisan'anjara, manamboatra, manosihosy / folyose Acroporidae Acropora
Toe-tsaina, atidoha Faviidae Favia
Boky mainty | matevina Poritidae Porites
Coral Fitness Trade of Clade D Symbiodinium
Mitondra fahamendrehana kokoa Symbiodinium dia hiara-miasa amin'ny fifehezan'ny hôpitaly. Ny zooxanthellae hafanana avo kokoa dia mety ho avy amin'ny fandaniana ara-tontolo iainana, toy ny fihenan'ny fitomboan'ny fihenan-tsakafo sy ny fihenan'ny fibobohan-toaka, ary noho izany ny fihenan'ny fihenan-tsakafo taorian'ny fahasimbana. Nisy fanadihadiana natao tany amin'ireo nosy tany Keppel ao amin'ny Haran-dranomasin'ny Barrage Lehibe. Eo ambanin'ny fepetra voafehy, Acropora millepora Ny corals with clade D symbionts dia mitombo 29% miadana kokoa noho ireo izay manana symbionts clés C2. Tany an-tsaha, ny kolontsaina D dia nitombo 38% nilandrano noho ny kolosianina C2. Ireo vokatra ireo dia mampiseho ny habetsaky ny varotra mety ho tratran'io karazam-pirazanana io rehefa mampitombo ny toe-piainana mafana kokoa izy ireo amin'ny fiovan'ny d zooxanthellae kokoa. ref
Ny teny hoe "zooxanthellae" dia manondro karazana algan'ny karazana Symbiodinium. Symbiodinium dia vondron'olona dinoflagellates isan-karazany, anisan'izany ny sivy phylogenetic karazany, nohariana toy ny clades AI. Ireo karazana jadona samihafa ireo dia manana karazana tontolo iainana, ekolojika ary ara-jeografika izay misy fiantraikany amin'ny fanoherana sy ny faharetan'ny vatohara amin'ny fiakaran'ny hafanana. Ny fanadihadiana dia nanambara fa ireo karazana zooxanthellae samihafa dia manana fiheverana samihafa amin'ny fiakaran'ny hafanana sy mazava.
Clade D Symbiodinium dia mandefitra am-pahamendrehana ary mampitombo ny fanoherana ny vatohara izay mampiakatra azy ireo amin'ny sehatra SSTs. ref Clade D Symbiodinium dia hita any amin'ny karazan-karazana isan-karazany. Clade D Symbiodinium dia hita any amin'ny ambaratonga ambony kokoa amin'ny vatohara sasany noho ny hafa, ary matetika izy ireny no miparitaka amin'ny lozam-pifamoivoizana ara-tsolika avo lenta na ny lozam-pifamoivoizana ao an-toerana (ohatra ny fialan-tsasatra amin'ny haran-dranomasina) miaraka amin'ny tantaran'ny harivan'ny haran-dranomasina. Ohatra, tsindrio D Symbiodinium dia be dia be kokoa ny vatohara acroporid avy amin'ny lakalambo an-dalamby any Samoa Amerikanina, izay ny SSTs Mahatratra haavo farafahakeliny avo lenta kokoa noho ny tontolo iainana an-habakabaka, toerana Acropora ny tompon-trano ref Satria matetika izy ireo no mitombo be amin'ny haran-dranomasina izay mibaribary amin'ny fitaintainan'ny tontolo iainana, ny fisian'ny clade D symbionts dia mety ho famantarana ara-biôlôjika amin'ny fiovana ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny vatohara. Na izany aza, tsy izany foana no izy; Indraindray, ny tsimionts D symbionts dia maneho ny fampitomboana tsara amin'ny toe-javatra manelingelina. Ny fampahalalana momba ny habetsaky ny clade D zooxanthellae dia afaka manampy ireo mpitantana hahatakatra ny fahatsapana ny vatohara manokana amin'ny fiakaran'ny hafanana ary koa ny mamantatra ny fiovana amin'ny fahasalaman'ny vatohara.
Acclimatization versus adaptation
Ny teny hoe acclimatization sy ny fampifanarahana dia matetika ampiasaina amin'ny teny mitovy nefa tsy mitovy. Ny akimlimisation dia manondro ny fiovana ara-batana, fa ny fanitsiana dia manondro ny fiovana amin'ny genetika. Acclimatization
Fiovana nitranga nandritra ny androm-piainan'ny olona iray
Fiovàna vokatry ny fanakanana ny fiovaovan'ny tontolo iainana ary manampy ny olona iray ho tafavoaka velona amin'ny tontolo iainana. Ny fiovana toy izany dia tsy azo ampitaina amin'ny taranaka.
Fiovana nitranga tamin'ny taranaka nifandimby
Fiovana izay manome fahafahana hampivelatra sy hiteraka ao anatin'ny tontolo iray manokana
Ny fahaizana mifandray amin'ny karazana zooxanthellae dia matetika ao amin'ny vatohara. ref Ny fifanakalozan-kevitra mifototra amin'ny zooxanthellae dia fomba fiasa mety ahafahan'ny vatohara miaina ny tsindry avy amin'ny rivotra, toy ny fiakaran'ny hafanan'ny ranomasina. Ny fiovana eo amin'ny karazana zooxanthellae karazam-pambolena dia mety hitranga amin'ny alalan'ny dingana roa:
"Mipetrapetraka" - - fiovana amin'ny habetsaky ny zooxanthellae izay misy ao amin'ny vatan'ny vatohara
"Miova" - fananganana zoroxanthellae vaovao avy amin'ny tontolo iainana
Amin'ny vanim-potoana fohy, dia mety hamehy na hanova ny zooxanthellae ny vatohara misy alikaola matevina; Ary ny fitomboan'ny habetsaky ny tendrony zooxanthellae matanjaka tsara (toy ny an'ny clade D) dia andrasana miaraka amin'ny fihenan'ny fihenan-java-manify. Ny fahafahana mampifanaraka ny fiakaran'ny mari-pahaizan'ny ranomasina dia miankina amin'ny fiovaovan'ny vary varietro ho an'ny fandeferana hafanana, ny vanim-potoan'ny taranaka mpikarakara ny haran-dranomasina ary ny zooxanthellae, ary ny tanjaky ny fifidianana.
Ny fahalalana ny toetran'ny zavamananaina amin'ny vatohara tsirairay dia mampitombo ny fahafahana maminavina ny valin-dresaka henjana amin'ny hetsika hafahafa.
Ny karazam-borona maro sy ara-batana maromaro dia afaka manampy amin'ny fahafahany manohitra ny fanasitranana, anisan'izany:
Ny pigmentant fluorescent varieties amin'ny vatohara dia manome rafitra ho an'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana. Ny fiheverana ireo pigments dia tsy mitovy amin'ny karazana. Top sary © Evelyn The; Sary afovoany sy ambany © S. Kilarski / TNC
Ny proteinina hafanana: Misy karazana proteinina maro be hita ao amin'ny vatan'ny haran-koditra ary misy fiantraikany eo amin'ny valin-kibo. Ny proteinina mitam-piarovana dia manampy amin'ny fitazonana ny rafitra proteinina sy ny sela, aorian'ny fihenjanana. ref Ohatra, ao amin'ny fianarana iray, ny vatoharan-tsoratry ny hazavana avo lenta amin'ny vatohara Goniastrea aspera Nihena be ny proteinina ngezabe ary tsy naharary ireo vatasarihana ireo, fa tsy toy ireo faritra misy ilay zanatany izay tsy nampiavaka ny hazavana avo. ref
Fiarovana amin'ny tavy: Ny Corals dia fantatra amin'ny loko marevaka, noho izy ireo indrindra amin'ny proteinina fluorescent ao amin'ny vatany. Ny proteinina Fluorescent dia manome rafitra ho an'ny fanamafisana ny hazavana; Miaro ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fantsonan'ny masoandro izy ireo amin'ny alàlan'ny fanivanana ireo taratra UVA. Ny fahafahan'ny proteinina amin'ireny proteinina ireny dia manome rafitra fiarovan-tena anatiny izay mety hisy fiantraikany manan-danja eo amin'ny famerenana ny vatohara lavitr'ezaka mifandraika amin'ny fiakaran'ny hafanana. Ny corals misy proteinina fluorescent dia hita fa miha-maina kokoa noho ny kolonisma tsy misy fluorescent karazana mitovy. Ankoatra izany, fianarana vao haingana ref dia hita fa misy anjara fanampiny amin'ny proteinina fluorescent ho antioxidants, izay mety hanampy amin'ny fisorohana ny fihenjanana amin'ny vatohara. Ny fiheverana ny proteinina fluorescent dia miovaova amin'ny karazana (ohatra ny pocilloporids sy acroporides dia manana dity ambany, raha toa kosa ny poritids, faviids ary ny hafainganam-pandeham-barotra manjopiaka dia manana dity avo).
Fiovana amin'ny fihetsika fikarakarana ho setrin'ny fikorontanana ara-pifandraisana: Ny vatohara sasantsasany dia miankina betsaka amin'ny sakafo avy amin'ny ranon-drano mba hanamafisana ny fepetran'ny angovo. Ireo vatohara ireo dia mety tsy dia miankina amin'ny hery omen'ny zooxanthellae azy, ary noho izany dia mihena kokoa ny hanoanana mandritra ny hetsika mahavariana rehefa esorina ivelan'ny vatohara ny zooxanthellae. Ankoatra izany, ny vatohara sasany dia afaka manova ny fihetsika mamelona azy ho valin'ny fivalozana. Ny porofo manaporofo fa ny karazam-boankazo izay afaka manova ny fihetsika sakafo dia mety ho tafavoaka velona kokoa noho ny karazana izay tsy mety. ref
Ny hatevin'ny tavy: Ny hatevin'ny vatam-panafody dia mety hampitombo ny fahatsapana ho marefo. Ny vatan'ny fivalanana dia hita amin'ny karazam-boaloboka izay mora kokoa amin'ny fivalozana. Ny tavy faran'izay kely dia mety manampy ny manaloka ny zooxanthellae amin'ny hazavana mahery, mampihena ny adin-tsakafo, ary mihena ny fahafahana mihidy.
Shading: Ny fisian'ny alokaloka dia mety hampitombo ny fanamafisana ny fahandroana. Rehefa misy ny alokaloka, na noho ny toetr'andro (ny rahona maharitra) na ny toerana misy ny vatohara (ohatra ny alokaloka ambony na ny zavamaniry manjavozavo), dia mety hihena kokoa noho ny fihenan'ny taratra masoandro ny fahandroana.
Tantaran'ny fanindrahindrana: Amin'ny ankapobeny, ny Corals dia mila fari-piainana sasantsasany amin'ny fepetra sasany hivoahana (ohatra ny hafanana, ny halozana, ny hazavana), fa ny vatoharan-tsambokely sasany dia manamafy ny fepetra henjana indrindra amin'ny sisin-tany ivelany. Ny tantaram-piainana amin'ny hafanana ambony dia mety hisy fiantraikany amin'ny fandeferana ny vatohara ary hampitombo ny herim-pony. Ohatra, ny vatohara dia mafana kokoa noho ny salan'isan'ny salan'isan'ny ala mialoha ny fisian'ny hainteny dia mety handefitra kokoa noho ny vatohara tsy mbola voatsinjara (Middlebrook et al. 2008). Ny vatohara salantsalany any amin'ireo faritra izay avo lenta loatra (ohatra, amin'ny lakandrano any amin'ny harambato) dia mety kokoa noho ny fiakaran'ny hafanana (McClanahan et al. 2007, Oliver sy Palumbi 2011). Ankoatra izany, ny vatohara izay mahatsapa hatrany ny toe-piainana miteraka hafanana, toy ny vatohara ary ny havoana, dia mety ho feno harevaka kokoa sy miorina amin'ny fihenjanana.
Ny torolalana momba ny famantarana ny vatoharan-doko manerantany dia ahitana ireto torohevitra manaraka ireto: ref
Manangona antontan-kevitra efa misy na fahalalana eo an-toerana momba ny firafitry ny vondrom-piarahamonina coral eo amin'ny toerana Fantaro ireo tarika mpihinam-be manan-danja ary mametraka ny fandeferany mandanjalanja mifototra amin'ny morphology (mass> fanodinana> sampana / tabilary).
Manaova fanadihadiana momba ny firafitry ny fiompiana coral eo amin'ny toerana ary manombatombana ny fananana ny karazana vatohara fantatra ho marefo kokoa na mandefitra amin'ny fandrakofana.
Raha toa ka misy ny angona azo ampiasaina, ampiasao ny fikarohana ara-pahasalamana momba ireo vatohara manan-danja indrindra mba hamaritana ny fanoherana sy ny fandeferana azo avy amin'ny karazana zooxanthellae, pigmenta fiarovana fotsy, na toetry ny tebika (lipidipaipaipaika), ary / na heterotrophic capacity.
Indray mandeha ny mpitantana dia nanamarina ny fandeferana ny haran-dranomasina ao amin'ny tranonkala mifototra amin'ireo hetsika voatanisa ao amin'ny bala teo aloha, afaka mampiasa izany fampahalalana izany izy ireo hampahafantarana ny design sy ny fitantanana MPA. Ohatra, ireo faritra izay tarihin'ny vatoharan-doko manerantany dia azo raisina ho laharam-pahamehana amin'ny fiarovana amin'ny MPA. Ireo tranokala izay ahitana ny hara-bato izay mampiseho ny fananana fanoherana dia natao ho fialofana sy loharanon'ny voa, ary mety ho tena ilaina fifandraisana ary ny dingana hafa momba ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny maitso. Ireo sehatra natosiky ny karazam-biby tena azo tsapain-tanana dia tena manakiana ny fanarahamaso ireo zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny hafanam-po mba hanombanana ny valin-kibo momba ny tontolo iainana amin'ny vatohara.